Aynu wax ka baranno Tween 80 (oo sidoo kale loo yaqaan Tween 80 ama polysorbate 80) iyo Tween 20 (oo sidoo kale loo yaqaan Tween 20) saddex siyaabood oo kala duwan
1。 Isku-dhafka Tween 80 wuxuu ku saleysan yahay polymerization-ka soratol monooleate iyo ethylene oxide. Soo koobidda Tween 20: isku dar ah polyetylen glycol iyo qayb ka mid ah polyetylen glycol. Inta udhaxeysa 80 waa nooc ka mid ah polyol nonionic surfactant, oo badanaa loo isticmaalo polysorbate. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dareeraha, isku-darka adag iyo diyaargarowga adag, sida emulsifier O / W, solubilizer, wakiilka qoynta, kala firdhinta iyo xasiliyaha.
2. Inta udhaxeysa 20 isticmaal: uumiga saxarada iyo ethylene oxide, maxaa yeelay molecules-keedu wuxuu leeyahay kooxo badan oo hydrophilic polyoxyethylene ah, marka wuxuu leeyahay hydrophilicity xoog leh, as a non-ionic filter. Caadi ahaan loo isticmaalo sida emulsifier O / W, waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lala kaashanayo laba iyo toban alkyl sulfate ama emulsifier nooca taako si loo hagaajiyo xasiloonida emulsion. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidii milanka solubilizer-ka dawooyinka qaarkood. Astaamaha Tween 80: qiimaha peroxide ee Tween 80 ma ka badna 10, taas oo huruud khafiif ah u ah dareere viscous oranji ah; xoogaa ur buu leeyahay. Dhadhan qadhaadh oo qadhaadh, waxaa jira dareen diiran. Waxay ku milmi kartaa biyaha, ethanol, methanol ama ethyl acetate, laakiin waxay ku milmi karaan saliidda macdanta.